Pyzo: muchinjikwa-chikuva chakabatanidzwa nzvimbo yekuvandudza yePython | Linux Vakapindwa muropa
Zuva re Ndiri kuzotaura nezve yakanakisa yakasanganiswa nzvimbo yekuvandudza yePython, iyo application yatichataura nezvayo nhasi ndiPyzo. Iyi yemahara uye yakavhurwa sosi IDE yakaburitswa pasi peBSD rezinesi.
Pyzo muchinjikwa-chikuva IDE iyo inoshandisa miniconda uye anaconda inogona kubata ako Python mapakeji, kunyangwe iwe uchikwanisawo kuishandisa pasina muturikiri.
pyzo Izvo zvakanyorwa muPython 3 uye inoshandisa iyo widget Qt turu yekushandisa inouya nezvikamu zviviri zvakakosha, mupepeti uye iyo Shell, iyo zvakare inotsigira kufungidzira uye inobvumidza nzira dzakasiyana dzekudyidzana kuita kodhi.
Inowanikwa kuLinux, Mac OS, uye Windows. Zvimwe zvinhu ndezvapfupisa edita, Qt madingindira, Unicode rutsigiro, otomatiki induction, syntax kuratidza, uye kugadzirisa dambudziko.
2 Maitiro ekuisa iyo Pyzo IDE paLinux?
Pyzo inzvimbo yekuronga yePython iyo tsvaga nyore uye kudyidzana. Inotarisa mukudyidzana uye kufungidzira, izvo zvinoita kuti ive inokodzera komputa yesainzi.
Pamusoro peizvi IDE ine rutsigiro rwekusimbisa syntax yePython, Cython, naC. Kunyangwe ivo vanoronga kuwedzera imwe rutsigiro mune ramangwana vhezheni yemimwe mitauro yekuronga.
pyzo ine nyore kuchinjika uye kuwedzeredzwa syntax schemas. Isu tinogona zvakare kuwana muIDE mukana wekupindura uye kusagadzikana mitsara yakasarudzwa.
Iko mukana wekukwanisa kudhonza uye kudonhedza mafaera muchirongwa kuti ugone kuvhurwa, anowanikwa mune ino IDE, pamusoro pekusaregeredza kuti inotsigirawo kudhonza kwese madhairekitori.
Mukati memupepeti unogona kuwana basa rekutsvaga nekutsiva mataurirwo kana mitsara yakazara, ino iri basa rakakosha mune chero IDE.
De mamwe mabasa atinogona kuwana, sekumaIDE mazhinji, kuve kugona kushandisa tabo mukati meye mupepeti, chinja tambo masitaira, induction magwara, shandura uye ita zvekare.
Pakati pehumwe hunhu hwatinogona kuratidza tinowana:
Faira Explorer, neizvi unogona kunyora ese mafaera mune ako mapurojekiti nebhukumaki madhairekitori emapurojekiti ako.
Chinja zviri nyore pakati pemapurojekiti.
Chimiro chefonti: chishandiso chinoratidzira chimiro chemafonti mune widget yemuti.
Kukwanisa kunyora makirasi, mashandiro (uye nzira), kupinza kuzivisa, maseru, uye zvinhu zvebasa.
Inopindirana Rubatsiro - Chishandiso chinoratidzira ruzivo rwekubatsira (pakusarudza uye kupururudza kuburikidza neye auto-yekupedzisa chinyorwa
Nzvimbo yekushandira: inonyora zvese zvinoshanduka (zvakare mumamiriro ekugadzirisa).
Bhurawuza kuburikidza mafaera uye tsvaga mafaera mukati.
Tinotarisira kugamuchira zvipo zvinobatsira kubva kuvashandisi zvinowedzera sezvishandiso zvakajairika.
Maitiro ekuisa iyo Pyzo IDE paLinux?
Si vanoda kuisa ino yakavandudzwa nharaunda yekuvandudza yePython pane yavo masystem, tinogona kutevera chero ipi yedzinotevera nzira dzatinogovana pazasi, zvinoenderana nekuparadzirwa kweLinux kwatiri kushandisa.
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veDebian, Ubuntu, Linux Mint kana chero kugoverwa kunobva pane izvi. Tinofanira kuvhura terminal uye toteedzera unotevera kuraira mairi:
Kana izvi zvaitwa, isu tinogona kuenderera nekuisa iyo IDE nemurairo uyu:
Uye voila, neizvozvo isu tichava neIDE yakaiswa mune ino sisitimu.
Para nyaya yeavo vanoshandisa Arch Linux, Manjaro, Antergos kana kupihwa kupi kunobva kuArch Linux Tinogona kuisa iko kunyorera kubva kuAUR zvinyorwa, isu tinongofanirwa kuve neyakavandudzwa wizard.
Pakupedzisira, kune mamwe maLinux distros, tinogona kushandisa imwe nzira yakajairika. Saka tinogona kushandisa Flatpak kutora iyo app.
Isu tinongofanirwa kuve nerutsigiro kuti tikwanise kuisa mapakeji neiyi tekinoroji. Unogona kutarisa iyo inotevera.
Iye zvino Isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye kumhanya mairi:
Uye ndizvozvo, iko kuiswa kwacho, kwakagadzirira kushandiswa.
Kana iwe ukasakwanisa kuwana iyo yekutanga, unogona kuimhanya kubva kune iyo terminal ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Pyzo: muchinjiko-chikuva chakabatanidzwa budiriro nharaunda yePython